जनताले बोकाइदिएको भारी सही ठाउँमा पुर्याएर बिसाउछुः पौडेल • Pokhara News by Ganthan
प्रकाशित ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
पोखरा, ५ मंसिर / कास्की क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार खेमराज पौडेलले जनताले बोकाइदिएको भारी सही ठाउँमा पुर्याएर बिसाउने बताएका छन् । बिहीबार पोखरा–१६ मा आयोजित सभामा उनले आफूले जनताकै लागि ६० वर्ष राजनीति गरेको भन्दै अबको जिम्मेवारी पनि सफलतापूर्वक निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे ।
उक्त अवसरमा नेता धनराज गुरुङले त्यागी, इमान्दर र निष्ठावान व्यक्तित्व खेमराज गुरुलाई जिताउँदा पोखरेलीको इज्जत नै माथि हुने बताए । उनले भने, ‘खेमराज गुरु सबैले सम्मान गर्न लायक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँ संस्कारी नेता पनि हो । धर्म संस्कारलाई उहाँले सधैं शिरमा राखेर हिंड्नु भएको छ । त्यसैले उहाँलाई विजय गराउनु पोखरेलीको कतव्र्य हो ।’
मराज जस्ता व्यक्तित्वलाई जिताएर देशैभर इमान्दार व्यक्ति राजनीतिमा आवश्यक पर्छ भन्ने सन्देश दिन पनि आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उम्मेदवार खेमराज पौडेल, नेता धनराज गुरुङ लगायतले पोखरा–१६, जोगिमणीस्थित रनबहादुर गुरूङको परिवारलाई भेटेर समवेदना प्रकट गरेका छन् ।
रणबहादुर गुरुङको ९७ वर्षको उमेरमा केही दिन अघि निधन भएको थियो । स्व. रणबहादुरका छोराहरू योगबहादुर र रुन बहादुर गुरुङका साथै परिवारजनलाई भेटेर पौडेलले समवेदना प्रकट गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा उम्मेदवार पौडेलले आफ्नो धर्म, संस्कार छोड्न नहुने बताए । अरूले ७ दिन मै काजकिरिया सके पनि धर्म संस्कार अनुसार नै गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालमा कोरोना परीक्षण सगँ हुदाँ अन्य विरामी त्रसित ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
बिदेश भएका नेपालीका सम्बन्धमा एकपटक सोच्ने कि ? ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
पोखराका ३ नेपालीलाई भारतले अष्ट्रेलियाबाट दिल्ली ल्यायो ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
थप ७७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ६८२ पुग्यो, थप १ जनाको मृत्यु ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
पोखराका नागरिक अभियन्ताको एमसीसी खारेजी माग ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
आहत परिवारलाई राहत बाँड्दै श्रेष्ठ र थापा ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
पोखरामा काम गर्दा गर्दै ढलेपछि मृत्यु ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
थप ७२ जनामा कोरोना, संक्रमित ६७५ पुगे ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
पोखरामा कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन तालिम( यस्तो छ कार्यविधि) ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
श्रेष्ठलाई प्रेस युनियन अवार्ड ५ मंसिर २०७६, बिहीबार १६:४६
१० मंसिर २०७६, मंगलवार १५:२०